Ilka-xanaf oo u gefay dadkii ka qeybgalay shirkii Wadatashiga Xeerka Nidaamka Garsoorka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ilka-xanaf oo u gefay dadkii ka qeybgalay shirkii Wadatashiga Xeerka Nidaamka Garsoorka
A warsame 20 October 2014 21 October 2014
Mareeg.com: Gollaha Adeegga Garsoorka ee hadda shaqeeya, balse dhawaan lasoo saaray sharci wax looga badelayo, uuna madax u yahay Gudoomiyaha Maxkamadda Sare Avv. Ceydiid C/llaahi Ilka-xanaf oo shir jaraa’id ku qabteen Muqdisho ayaa waxa ay kaga horjeesteen go’aanno laga soo saaray shir looga hadlayay garsoorka oo ay soo qabanqaabisay Wasaaradda Cadaaladda iyo Dastuurka oo 17-kii bishaan Muqdisho lagu soo gabagabeeyay.
Xubnaha Golaha Adeega Garsoorka waxa ay sheegeen in hey’adaha waaweyn ee dowladda, sida Fulinta, sharcidajinta iyo garsoorku ay kala madax bannaan yihiin.
Waxaana ay ku doodeen in wasaarad kaliya oo ka tirsan xukuumadda ay sharci ahaan qalad tahay in garsoorka uu hoostago.
“Shirarka badan ee magaalada lagu qabanayo ee dad badan la isugu keenayo ee looga hadlayo garsoorka, waa shir aan sharci aheyn, dadka la isugu keenayanaya garsoorka lug kuma la, waxaa u aragnaa baroortu ceesaanta ka weyn, ujeedada laga leeyahay waa in Garsoorka la hoos geeyo wasaarada cadaalada, wax soconaya oo suura galayana ma ahan”ayuu yiri Avv Ilka-xanaf.
Gudoomiyaha Maxkamadda Sare Ceydiid Ilkaxanaf, oo hadalka furay ayaa u gefay dadkii ka qeybgalay shirka Wada-tashiga Xeerka Nidaama Garsoorka, wuxuuna ku andacooday in muddooyinkan ay soo badatay in hoteello la isugu geeyo dad aan ehel u aheyn nidaamka caddaalada Soomaaliya, oo ay ka hadlaan Garsoorka waxaana uu ku tilmaamay in dowladnimadu aaney ku socon karin hab NGO oo kale ah.
Wuxuu intaa raaciyay in dastuurka hadda jiraa aanu ku qorneyn wax la yiraahdo Xeer Ilaaliye Qaran balse lagu caddeeyay Garyaqaanka Guud. “Dastuurka hada aan leenahay maba ku jiro xeer ilaaliye ee waxaa ku jira garyaqaanka Guud” ayuu yiri Gudoomiyaha Maxkamada sare.
Shiikh Abdirahman Xuseen Samatar, oo ka mid ah xubnaha Gollaha Adeegga Garoorka ayaa isaguna sheegay in Soomaaliya maanta ay mareyso marxalad muhiim ah oo ah in la kala doorto garsoor madaxbanaan iyo garsoor xukuumadda u adeega wadadana u xaara.
Dhamaadkii shirka Wadatashiga Xeerka Nimaadka Garsoorka ee dhacay 13-17 October ayaa Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranku, Axmed Cali Daahir, wuxuu uga dhawaaqay iney waajib tahay dhaqangelinta Sharciga Golaha Adeega Garsoorka oo dhawaan lasoo saaray, baarlamaankuna meel mariyey.
Shirka Wadtashiga Xeerka Nidaamka Garsoorka iyo dhismaha Maxkamada Dastuuiga ah ayaa waxaa ka qeybgalay ilaa 130 qof oo ka kala yimid gobolada dalka, kuwaasoo intooda badan ka shaqeeya Garsoorka, wasaaradda Cadaaladda, Ururada bulshada Rayidka ah, Ururka Qareenada, Jaamacadaha dhiga Shareecada iyo Qaanuunka.
Shir ku saabsan Shidaalka & Gaaska Sooomaaliya oo dhacaya dalka Britain